पतिपत्नी बीच झग`डा भइ रहन्छ भने अप्नाउनुहोस् यी उपाय !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/पतिपत्नी बीच झग`डा भइ रहन्छ भने अप्नाउनुहोस् यी उपाय !!
पति पत्नीबीच बेला बेलामा झग`डा पनि हुन्छ भने प्रेमपनि हुने गर्दछ। शिष्टाचार र व्यवहारले सम्बन्धमा निकै गहिरो प्रभाव पार्दछ। कयौँ समय पति पत्नी बीच सानो सानो कुरामा झ`गडा तथा मन मुटाव यति धेरै बढ्छ की सम्बन्धमा दरार आउन समय लाग्दैन। आफ्नो सहपाटीको सानो कुरामा पनि रिसा`उनु, बहाना बनाउने बानी हुनुले सम्ब`न्धमा खट्प`ट आउन थाल्दछ।
यदी तपाईको सह`कर्मी पनि सानो सानो कुरामा रिसाउने गर्दछन् भने सबै भन्दा पहिले तपाईले त्यस्तो व्यवहार देखाउनुको पछाडिको कारण जान्न आवश्यक छ। त्यसको समाधान निकाल्न सक्नु भएन भने कुनै ज्योति`षका उपाय अप्नाउनु उत्तर रहन्छ। ज्योति`षका अनुसार गुरु ग्रहको विवाहका कारण ग्रह मानिने गरिन्छ। विवाहको स्थान, जन्म पत्रिकाको सप्तम स्थान हुने गर्दछ।
कुण्डलीमा यसको स्थान यदी सूर्य, गुरु, राहु, मंगल, शनि जस्ता ग्रह भएका वा यी स्थानमा यिनको दृ`ष्टी भएमा वैवाहिक जीवन सुखी हुन सक्दैन्। सप्तम स्थानमा सूर्य हुनु निश्चित सम्बन्ध विच्छेदको कारण हो। त्यही कुण्ड`लीमा गुरु कमजोर भएमा पनि विवाह सँग सम्ब`न्धीत समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ।
शिव लिंगको पुजाः पति पत्नीले आफ्नो झगडाबाट बच्नका लागि सोमबार एकसाथ भगवान् शिवको पुजा आरधना गर्नु भएमा तपाईको सम्ब`न्धमा सुधा`र आउन सक्छ। सिन्दुरको डिब्बा पति सुत्ने ठाउँमा राख्नेः यदी पती पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ भने पत्नीले पतिलाई नसोधेर पति सुत्ने ओछ्यानको मुनी सिन्दुरको डिब्बा राखिदिनु पर्दछ। त्यसपछि बिहान उठेर उक्त डिब्बाको सिन्दुर लगाउने गर्यो भने पनि तपाईको कुण्डलीको दोष मेटिन सक्छ।
सूर्यलाई जल चढाउनेः विवाहित जोडिले हरेक बिहान सुर्यलाई जल चढाउने गर्यो भने पनि तपाईबीच हुने गरेको झगडा प्रेममा परिनत हुन थाल्दछ। गौमती चक्रः यति तपाई पति पत्नीबीच प्रेम बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लगाउने गरेको सिन्दु`रको डिब्बामा एउटा गौमती च`क्र राख्नु पर्दछ। किनकी उक्त चक्रलाई शुभ मानिने गरिन्छ।
दोलखा भीमसेनलाई पसिना आयो ! के अहिलेको अनि`स्ठ यसै कारण ले भएको हो त ? यस्तो छ वास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस)
यस्तो झरना जसको तल सधैँ बलिरहन्छ आगो ! एक शेयर अबश्य गर्नु होला !
पतिपत्नी बीच झगडा भइ रहन्छ भने अप्नाउनु होस् यी उपाय